ch 17 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 17 မဿဲ
17:1 ထိုအခြောက်ရက်ပတ်လုံးပြီးနောက်, Jesus took Peter and James and his brother John, and he led them ontoalofty mountain separately.
17:3 ထိုအခါ, there appeared to them Moses and Elijah, speaking with him.
17:4 And Peter responded by saying to Jesus: "သခင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဤနေရာတွင်ဖြစ်ရန်အဘို့အကောင်းပါ၏. သငျသညျဆန္ဒရှိရောက်နေတယ်ဆိုရင်, let us make three tabernacles here, သင်တို့အဘို့အတစျခု, one for Moses, ဧလိယဘို့တ။ "
17:5 ထိုမင်းသည်နေဆဲစကားပြောနေစဉ်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ,ashining cloud overshadowed them. ထိုအခါ, there wasavoice from the cloud, ဟုဆို: "ဤသူကားငါ၏ချစ်ရာသခင်သည်သားတော်, with whom I am well pleased. သူ့ကိုနားထောင်ပါ။ "
17:6 And the disciples, ဒီကြားနာ, fell prone on their face, and they were very afraid.
17:7 And Jesus drew near and touched them. ထိုသူတို့အားဆို၏, “Rise up and do not be afraid.”
17:8 ထိုသူတို့၏မျက်စိကိုချီ, they saw no one, except Jesus alone.
17:9 ထိုသူတို့ကတောငျပျေါမှဆငျးသခဲ့ကြသည်အဖြစ်, ယရှေုကသူတို့ကိုညွှန်ကြား, ဟုဆို, "ရူပါရုံအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမကိုပြောပြပါ, လူသားသည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီအထိပါပဲ။ "
17:10 တပညျ့တျောတို့သူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်, ဟုဆို, "အဘယ်ကြောင့်ထို့နောက်ကျမ်းပြုဆရာဧလိယကိုပထမဦးဆုံးရောက်လာရန်အဘို့အကလိုအပ်သောကြောင်းဆိုကြ?"
17:11 သို့သော်တုန့်ပြန်, သူတို့ပြောဆို: "ဧလိယ, တကယ်ပါပဲ, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရောက်လာခြင်းနှင့်ပြန်ပေးရမည်.
17:12 သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, ဧလိယသည်ပြီးသားရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ, သူတို့ကသူ့ကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူ့ကိုလိုချင်သမျှကို ပြု.. ဒါကြောင့်လည်းလူသားကိုသူတို့ထံမှခံရကြလိမ့်မည်။ "
17:14 And when he had arrived at the multitude,aman approached him, falling to his knees before him, ဟုဆို: "သခင်, take pity on my son, for he is an epileptic, and he suffers harm. For he frequently falls into fire, and often also into water.
17:16 Then Jesus responded by saying: “What an unbelieving and perverse generation! How long shall I be with you? အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါသည်သင်တို့ကိုသည်းခံရကြမည်? Bring him here to me.”
17:19 ယေရှုက: “Because of your unbelief. အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, မုချ, if you will have faith likeagrain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move. And nothing will be impossible for you.
17:21 And when they were conversing together in Galilee, ယေရှုက: “The Son of man shall be delivered into the hands of men.
17:22 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုသတ်ပစ်လိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သူ။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည် "ထိုသူတို့ကအလွန်အမင်းဝမ်းနည်းခဲ့ကြ.
17:23 ထိုသူတို့ကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်လာခဲ့ကြသောအခါ, ထက်ဝက်ကျပ်ကောက်ယူသောသူတို့သည်ပတေရုသခဉျြးကပျ, သူတို့သညျမဟုမိနျ့, "သင်၏ဆရာကိုထက်ဝက်ကျပ်ပေးဆောင်မဟုတ်?"
17:24 ဟုသူကပြောသည်, "ဟုတ်ကဲ့။ " သူသည်ထိုအိမ်တော်သို့ ဝင်. ပြီးမှ, ယရှေုသညျရှေ့သို့ချီသွားလေ၏, ဟုဆို: "ဘယ်လိုကြောင့်သင်ဟန်ပါဘူး, ရှိမုနျကို? ထိုလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်, အဘယ်သူကိုမှသူတို့အခွန်ဆက်သို့မဟုတ်သန်းခေါင်စာရင်းအခွန်ခံယူကြဘူး: သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြိုးသားတို့ထံမှသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားများထံမှ?"
17:25 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "နိုင်ငံခြားသားတွေကနေ။ " ဟုယရှေုကလညျး: "ထိုအခါသားတို့သအခမဲ့.
17:26 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုရန်အတားအဆီးဖြစ်လာမစေခြင်းငှါဒါ: ပင်လယ်သွား, တစ်ချိတ်ချ, နှင့်ဆောင်ခဲ့သောပထမဦးဆုံးငါးကိုယူ, သငျတို့သသည်၎င်း၏ပါးစပ်ဖွင့်လှစ်သောအခါ, သင်တစ်ဦးကိုငွေတကျပ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်ကို ယူ. ထိုသူတို့အားပေးလော့, ငါ့အဘို့နှင့်သင့်အဘို့။ "
အောက်တိုဘာလ 19, 2019
အောက်တိုဘာလ 18, 2019
အောက်တိုဘာလ 17, 2019
အောက်တိုဘာလ 16, 2019